एक वर्षभित्रै अनमोलका तीन चलचित्र, के होला स्टारडमको रहस्य ? - Everest Dainik - News from Nepal
एक वर्षभित्रै अनमोलका तीन चलचित्र, के होला स्टारडमको रहस्य ?
अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा स्टारडम कायम गर्न र रेकर्ड ब्रेक गर्न सफल सुपरस्टार अनमोल केसी सर्वाधिक खोजिने र चासो दिइने नेपाली अभिनेता पर्दछन् । चलचित्र छनौटमा चुजी यी चकलेटी अभिनेता वर्षमा एकभन्दा बढी चलचित्र गर्दैनन् ।
गएको ५ वर्षमा उनका ५ वटा मात्र फिल्म प्रदर्शनमा आए ।
‘होस्टल’, ‘जेरी’, ‘ड्रिम्स’, ‘गाजलु’ र ‘कृ’ हालसम्म उनले अभिनय गरेका नेपाली चलचित्र हुन् । यी कुनै पनि बक्स अफिसमा असफल भने भएका छैनन् ।
लगातार हिट चलचित्र आफ्नो खातामा जोड्न सफल उनी अहिलेका सर्वाधिक महंगा अभिनेता समेत हुन् । एक चलचित्र बापत ५० लाख बढी पारिश्रमिक बुझ्ने अनमोलले हालै छैटौं प्रोजेक्ट ‘क्याप्टेन’ को छायांकन सकेका छन् ।
यस लगत्तै उनले ‘ए मेरो हजुर ३’ को सुटिङ ज्वाइन गरिसकेका छन् ।
शनिवार पोखरामा चलचित्रको शुभ साइत गर्दै ‘अनमोल इभ’ का केही दृश्य पनि कैद गरिएको छ । फिल्मको औपचारिकरुपमा क्यामेरा अन भने असोज पहिलो साताबाट हुने छ ।
निर्देशक तथा अभिनेत्री झरना थापाकी छोरी सुहाना थापाले उक्त फिल्मबाट लिड रोलमा डेब्यु गर्दैछिन् । फ्लोरमा निस्कनु अगावै यस फिल्मको प्रदर्शन मिति यस वर्षको चैत २९ लाई पक्का गरिएको छ ।
‘ए मेरो हजुर ३’ को लागि तयारी सुरु गर्दैगर्दा अभिनेता अनमोल केसीलाई ठूलो फसाद आइपरेको छ । उनको आठौं प्रोक्जेक्ट ‘ब्याचलर बन्टी’ को पनि सुटिङ डेट र प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ ।
रोचक कुरा के छ भने दुई फिल्मको छायांकन सेड्युल जुधेको छ । ‘ब्याचलर बन्टी’ को सुटिङ असोज ३० गतेबाट आरम्भ हुने भएको छ । अब अनमोलले ‘ए मेरो हजुर ३’ सँगै उक्त फिल्मको सुटिङ सेट लगभग एकै समयमा ज्वाइन गर्नुपर्ने भएको छ।
निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत् फिल्मको प्रदर्शन मिति फागुन १७ गतेलाई तय गरेको बताएका छन् । सुटिङ सेड्युल त जुध्यो–जुध्यो अब दुई फिल्म एक महिनाको अन्तरमा रिलिज हुने भएका छन् ।
उता फिल्म ‘क्याप्टेन’ कात्तिक १६ गते आउने तरखरमा छ । यसो हुँदा यसवर्ष अनमोलका तीन फिल्म हलमा लाग्ने छन् त्यो पनि महिनाको गन्तीले निकै कम समयमा ।
‘क्याप्टेन’ र ‘ब्याचलर बन्टी’ को रिलिज ग्याप लगभग ३ महिनाको हुनेछ भने ‘ब्याचलर बन्टी’ रिलिजको एक महिनामा ‘ए मेरो हजुर ३’ प्रदर्शनमा आउनेछ ।
योभन्दा ठूलो फसाद अनमोलका लागि अरु के होला ?
उनले केही समय अगाडि निर्धक्क भनेका थिए, ‘मैले साइन गरेका फिल्म एकसाथ आउँदैनन् । ६ महिनाको ग्याप रहनेछ ।’ अब उनलाई आफ्नै बोली निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
निर्माता–निर्माताबीचको व्यावसायिक द्वन्द्वमा अहिले अनमोल नराम्रोसँग फसेका छन् ।
वर्षमा एक वा दुई चलचित्र लिएर आउने निर्णयमा अडिक भएर बसेका उनलाई अब निर्माताले महिनैपिच्छे पर्दामा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।
यो रणनीतिमा अनमोलले आफूलाई कुन रुपमा प्रस्तुत गर्छन् ? त्यो सबैभन्दा चाखपूर्ण रहने छ । यदि यसवर्ष उनका तीन फिल्म प्रदर्शनमा आएको खण्डमा अनमोलको चम्किलो स्टारडमलाई ठूलो धक्का पुग्ने पक्का छ ।
ट्याग्स: anmol kc, kollywood, superstar